बिहीबार, २९ पुष, २०७८
एजेन्सी । उत्तर प्रदेशमा विधान सभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै भारतीय जनता पार्टीलाई दुई दिन यता लगातार झट्का लागिरहेको छ ।
बुधबार ओबीसी नेता दारा सिंह चौहानले योगी आदित्यनाथको क्याबिनेटबाट राजीनामा दिएका छन् भने पार्टी परित्याग समेत गरेका छन् । दुई दिनमा राजीनामा दिने नेतामा उनी छैटौँ नेता हुन् ।
हालसम्म ९ जना भाजपाका नेताहरुले पार्टी परित्याग गरेको मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
तर, यस दौरान एक जना काँग्रेस र दुई जना समाजवादी पार्टीका विधायकले बिजेपी प्रवेश गरेका छन् ।
मन्त्री स्वामी प्रसाद मौर्य र क्याबिनेट मन्त्री दारा सिंह चौहानले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छाडेपछि राजीनामा दिने क्रम जारी छ । बिहीबार, शिकोहाबादका बीजेपीका विधायक डा. मुकेश वर्माले पार्टीको सदस्यताबाट राजीनामा दिए।
भाजपाको प्रारम्भिक सदस्यताबाट राजीनामा दिने चर्चा सामाजिक सञ्जालमा चल्न थालेको छ । उनले प्रदेश अध्यक्ष स्वतन्त्रदेव सिंहलाई राजीनामा बुझाएका छन् । डा. मुकेश वर्मा पाँच वर्षअघि मात्र भाजपामा प्रवेश गरेका थिए। यसअघि उनी बहुजन समाज पार्टीमा थिए । उनले बीएसपीबाट २०१२ को विधानसभा चुनाव लडेका थिए र दोस्रो भएका थिए।
पार्टीभित्र समस्या बढेको भन्दै उनीहरुले राजीनामा दिएको बताइएको छ ।
विधान सभा निर्वाचन